Ogaden News Agency (ONA) – Warbixinti Xafladi Manchester Iyo Gabay ay caruurtu kasoo jeedisay halkan ka daawo;
Warbixinti Xafladi Manchester Iyo Gabay ay caruurtu kasoo jeedisay halkan ka daawo;
Hoos Ka daawo Filimka warbixinta:
Magaalada Manchester ee wadanka Ingiriiska ayaa waxa lagu qabtay xaflad aad u weyn oo lagu xusayo maalinka haweenka Somalida Ogadeniya. Xafladan ayaa waxa kasoo qeyb galay dad aad u tiro badan oo kakalayimid Magaalada Manchester iyo nawaaxigeeda. Sidoo kale waxa xafladan kasoo qeybgalay Xubno kasocda Jaaliyadaha Ogadeniya ee UK.
Gudoomiyaha Jaaliyada Manchester Maxamed ayaa u mahad naqay Ururka haweenka ee Magaalada Manchester isaga oo ku sheegay inaysan suurto gal noqoteen la aantood. Waxa kale oo Gudoomiyuhu uu sheegay in Haweenka Somalida Ogadeniya la’aantood uusan halganka Ogadeniya socdeen.
Xafladan oo ay soo qaban qaabiyeen ururka dhalinta Somalida Ogadeniya ee OYSU ayaa waxa ka hadlay masuuliyiinta ururka OYSU oo hormuud uu ahaa Xoghayaha Guud ee qaarada Europe Halgame Salaad. Waxaana shirkan ahmiyad gooni ah lahaa gabdhaha Ururka OYSU oo halkaas kasoo jeediyay qudbado ku aadan munaasabada.
Suleekha oo ah masuul ka tirsan ururka dhalinta OYSU ayaa ka xog bixisay dhibaatooyinka haweenka kasoo gaadha daggaalada khaasatan haweenka Ogadeniya oo jidh-dil iyo kufsi badan loo geysto. Sulleeakha kumaysan hakan kaliya waxyeelada hawenka so gaadha ee waxay ka xog bixisay dareenka wanaagsan ee Haweenka somalida Ogadeniya. Iyada oo sheegtay haweenka Somalida Ogadeniya inay yihiin haweenka ugu qiimi badan adduunka.
Waxa kale oo goobta ka hadlay Gudomiyaha dhalinta OYSU ee Birmingham oo iyadu sheegtay in haweenka Ogadeniya ay garab taaganyihiin halganka xaqa ah ee lagu raadinayo xoriyada. Waxa ana garab taaganahay ayay tiri masuuliyiintayada iyo xooga qaranka Ogadeniya ee naftooda u huraya inay gabdhahooda sharaftooda kor u qaadaan.
Xafladan waxaa lagu xidhay khadka casriga ah ee Isgaadhsiinta Nafteed Hurto Abaawanada Caanka ah ee Geeska Afrika Rooda Afjano oo halkaas si toos ah kusiisayqudbad aad u qiimo badan oo ay kaga hadlayso ahmiyada haweenka somalida Ogadeniya. Waxay amaan usoo jeedisay halganka shacabka Somalida Ogadeniya oo ay ku sheegtay in la gaadhay waqtigii uu midho dhali lahaa. Waxa goobta ayhalganto Roda ay kasoo jeedisay gubaabo aad u xoog badan iyada oo markay laba eray dhahdoba Sacab iyo mashxarad aad u xoog badan lagu dhawaaqayay. Waxa goobtaas ay ka qaaday gabayadeeda kuwo loogu jecelyahay mid kamid ah oo lagu magacaabo CAAFIMAAD>
Shirkan ayaa soo jiidasho gooni ah ku lahaa ciyaal dadoodu u dhaxeyso 5 sano ilaa 12 sanno kuwaas oo kasoo jeediyay kulankan Gabayo aad u qiiro badan oo ay ku amaanayaan haweenka somalida Ogadeniya.
Waxa ay digniin ku siinayaan gumeysiga ethiopia oo uu hormuud u yahay kaligi taliye Zenawi. Gabadh jirta 5 sannoo ayaa hadalkeeda ku bilowday maanta waa maalin summad gooni ah noo leh waa maalinta haweenka Ogadeniya, Haweenka Ogadeniya ma ay niyad jabayaan mana ay ka tanasulayaan halganka Ogadeniya ilaa xoriyad laga gaadho.
Caruurta Somalida Ogadeniya ayaa lagu ababiyay qadiyada dhulkooda hooyo iyaga oo aqoon badan u leh tacadiyada iyo gumeysiga ka jira dhulkoodi hooyo.
Hadaba filimkan hoose ayaa Bahda ilays idiinka soo diyariyeen. Caruurta gabayadi ay soo jeediyeen hoos ka daawo.